1384 पटक पढिएको
लोकतन्त्रका लाभहरुको अधिकतम् वाँडफाँड गर्नका लागी नेपालमा विगत दशकौंदेखि भएका आन्दोलनको परिणम स्वरुप संविधानसभा मार्फत स्थानीय सहभागिता तथा स्वायत्तता प्रबद्धर्न गर्न तीन तहको सरकार सहितको राज्यको स्वरुप तयार भइसकेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरुले करिव २० प्रतिशत कार्यकाल समेत पूरा गरिसकेको अवस्था छ । विषेशतः स्थानीय सरकारलाई हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार हेर्ने हो भने स्थानीय तह सेवाप्रवाह केन्द्र, जनसम्पर्क केन्द्र, सेवा प्रवाह केन्द्र र जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा स्विकार गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकारको राजनीतिक सरकारको गठन भए पश्चात त्यसकै एक महत्वपूर्ण पाटो प्रशासनिक सरकारको सन्दर्भमा प्रसस्तै अन्यौलता तथा गुनासाहरु रहेको पाइन्छ । विगतको एकात्मक स्वरुपमा रहेको राज्य सत्ता हाल संघात्मक अवस्थामा आउँदा उही यथास्थितिवादी सोच र आफ्नौ स्वार्थ तथा हितमा प्रशासनिक संयन्त्र रहेको भन्ने कुरामा आंशिक सत्यता रहेको पाइन्छ । कर्मचारी समायोजन झन–झन जटील बन्दै गइरहेको अवस्था छ । यद्यपि भइरहेका प्रयासहरुलाई थप मजबुत तुल्याउदै जादा टुङ्गो अवस्य भेटिन्छ ।
प्रशासनयन्त्र योग्यहरुको सरकार हो । देशको शासन व्यवस्था त्यहाँको प्रशासनको उत्कृष्टता भन्दा माथि जान सक्दैन । राजनीतिज्ञले देखेको सपना पूरा गर्ने सबैभन्दा विश्वासिलो पात्रको रुपमा कुनै पनि देशको प्रशासन संयन्त्रले काम गरिरहेको हुन्छ । आवाश्यक नीतिगत व्यवस्था, श्रोत साधनको व्यवस्था तथा सुपरीवेक्षणको आशा राजनीतिबाट प्रशासनले राखेको हुन्छ । राजनीतिज्ञलाई तथ्यमा आधारित भएर सुझाव दिनु तथा आफ्नो व्यवसायिकतामा आधारित भएर काम गर्नु कर्मचारी प्रशासनको धर्म हो । त्यसै गरी प्रशासनप्रति तटस्थ व्यवहार तथा विश्वासको माग राजनीतिकयन्त्रसंग प्रशासनले राखेको हुन्छ ।
कर्मचारी प्रशासन योग्य र विषेशज्ञहरुको समूह हो । उनीहरु योग्यता प्रणालीबाट छनौट भएर आएका हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रलाई आफ्नो सेवकको रुपमा बुझ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । राजनीतिको लक्ष जनताका इच्छा र चाहना पूरा गर्नु हो । त्यस्तै प्रशासनको अन्तिम उदेश्य पनि नागरिकको खुसी र सन्तुष्टि नै हो ।
यसरी एउटै उद्देश्य लिएर हिडेकाहरुको बाटो त एउटै होइन र ? कि दुवैको उद्देश्यमा नै बिचलन आएको हो ? नभए एक अर्का प्रतिको यो अविश्वास किन ? एक सचेथ नागरिकले राखेका यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ कस कसले दिनुपर्ला ? सवाल यो हो ।
हाम्रो देशको प्रशासनले जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसकेको सत्यतालाई नकार्न सकिदैन । कर्मचारी संयन्त्रको पुनःसंरचनासंगै कर्मचारीहको संस्कारमा समेत परिवर्तन गर्नु पर्दछ । नागरिक र प्रशासन बीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुनु पर्दछ । कर्मचारीहरुले राजनीतिको चाकडी होइन जनताको सेवा गर्ने हो ।
प्रत्यक हप्ता नागरिकसंग बहस तथा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था कर्मचारी प्रसासनमा जरुरी छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, खुला समय, नागरिक बजेट, नागरिक सन्तुष्टि मापन आदिका माध्यामबाट प्रशासन र नागरिक बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ । नागरिकको अनुहारमा आउँने खुसी नै प्रशासनको सक्षमता मापन गर्ने औजार हो ।
(ढुङ्गाना नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन्)
प्रकाशित मिति २०७५ असोज ९